Wishpond: ခဲထုတ်လုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်အတွက်လှိုင်းတံပိုးပြုလုပ်ခြင်း Martech Zone
Wishpond: ခဲ Generation နှင့်အလိုအလျောက်အတွက် Waves အောင်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 16, 2015 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 23, 2020 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်မုန်တိုင်းထန်သည်။ ပလက်ဖောင်းအသစ်များအတွက် ၀ င်ရောက်ရန်အဟန့်အတားများသည်နိမ့်ကျလာနေသဖြင့်ရင့်ကျက်သောပလက်ဖောင်းများကိုစီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းများကမျိုချနေသည်။ အလယ်၌ကျန်သူများသည်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တွင်ကျရောက်နေသည်။ သူတို့ဟာဆုတောင်းပဌနာဖြစ်စေ၊ ဝယ်သူကိုဆွဲဆောင်ဖို့သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်မှီခိုနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Wishpond။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ သူတို့ဒေတာဘေ့စ်ရှိအဆက်အသွယ် ၂၀၀ ထက်နည်းသောအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခမဲ့အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဖွင့်ကြသည်။ အခမဲ့အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန့်သတ်ထားသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သွင်းကုန်များ၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၊
ဒါကြောင့်အခြေခံအားဖြင့် - ကြီးကျယ်တဲ့အီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်တော့၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်ကိုသင်ရရှိနိုင်တယ်။ ဤတွင်ရရှိနိုင်သောသော့ချက်ကိရိယာအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။
ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ - မိုဘိုင်းတုန့်ပြန်သော Landing Pages ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် A / B ခွဲခြားခြင်းပြုလုပ်ပါ။
ဝဘ်ဆိုက်ပေါ့ပ်အပ်များ - ၀ က်ဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များအား ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်လာပုံစံများဖြင့် ဦး ဆောင်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပုံစံများ - ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဘလော့ဂ်တွင်ခဲ - မျိုးဆက်ပုံစံများထည့်သွင်းပါ။
ပြိုင်ပွဲ & ပရိုမိုးရှင်း - Facebook လှူဒါန်းခြင်း၊ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများ၊ Instagram Hashtag ပြိုင်ပွဲများနှင့်အခြားအရာများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
marketing ကို Automation - သင်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ ဦး ဆောင်မှုသို့ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်များကိုအစပျိုးပါ။
အီးမေးလ်စျေးကွက် - လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေါ် မူတည်၍ ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး စီအတွက်သင်၏အီးမေးလ်များကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။
ဦး ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု - သင်၏ site နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၌သင်၏ ဦး ဆောင်မှု၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ Lists များကိုဖန်တီးပါ။
ခဲအမှတ်ပေး - မည်သည့် ၀ ယ်ယူရန်အသင့်ဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ရန်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပေါ် မူတည်၍ သင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုရယူပါ။
ခဲပရိုဖိုင်း - သင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပါ။ သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်လှုပ်ရှားမှု၊ သူတို့ဖွင့်လှစ်ထားသောအီးမေးလ်များကိုကြည့်ပါ။
မင်းကအေဂျင်စီတစ်ခုဆိုရင် Wishpond ထို့အပြင်အေဂျင်စီအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်။
ဖော်ပြရန်မ, သူတို့သည်လည်း Salesforce, Infusionsoft, Insightly, Batchbook, Highrise, Pipedrive, အဆက်အသွယ်, အခြေစိုက် CRM, SalesforceIQ, OnePage CRM, Close.io နှင့် Clio နှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းပေါင်းစပ်ရှိသည်။ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ပေါင်းစပ်မှုများတွင် MailChimp, AWeber, GetResponse, Constant Contact, Benchmark, Campaign Monitor၊ ActiveCampaignနှင့်အမ်မာ။ ၎င်းတို့တွင် Uservoice နှင့် help desk app များ၊ SurveyMonkey နှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများနှင့် ClickWebinar နှင့် Webinar အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် GoToWebinar တို့ပါရှိသည်။ ဖော်ပြထားခြင်းကိုလျှော့ချခြင်း။
ပြီးတော့ Wishpond ကဖုန်းနဲ့ SMS အတွက် Twilio ပေါင်းစည်းမှုကိုကြေငြာလိုက်သည်။
သင် WordPress အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက၎င်းတို့တွင် Landing Pages, Website Popups, Website Forms နှင့် Social Contests များအတွက်ပလပ်ဂင်များရှိသည်။
ထုတ်ဖော်: ငါတို့က Wishpond နှင့်မိတ်ဖက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီးဒီ post တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေကြသည်။
Tags: ActiveCampaignAWeberအခြေစိုက် CRMအသုတ်အခြေခံစံနှုန်းကင်ပိန်းု့ကပ်ရေးWebWebinar ကိုနှိပ်ပါclioClose.ioစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ရန်အမ်မာမင်္ဂလာပါGetResponseရပါတယ်HighriseInfusionsoftInsightlyဆင်းသက်စာမျက်နှာများအရူး MimimailchimpOnePage CRMရေနံချောင်းရောင်းသူရောင်းသူပျင်းရိလူမှုပြိုင်ပွဲများSurveyMonkeyTwilioအသုံးပြုသူအသံဒေါင်လိုက်ဝဘ်ဆိုဒ်ပုံစံများဝဘ်ဆိုက်ပေါ့ပ်အပ်များကွမ်းခြံကုန်း
၄ သင်၏တင်ဆက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာ - သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်မရှိခြင်းသည်ဖြုန်းတီးသောအချိန်၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်စီးပွားရေးဖြစ်သည်
Cloud-based Order Management စနစ်များသည်သင့်ဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ကူညီသည်
ဒီဇင်ဘာ 29, 2015 မှာ 11: 11 AM
Getpondes ကို GetResponse နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်
4:2016 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 50
ဂရိတ်ဆောင်းပါးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Wishpond ၏ကမ်းတက်စာမျက်နှာတည်ဆောက်သူနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြံအစည်များကဘာလဲ။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပါသလား။
ဇန်နဝါရီ 7, 2016 မှာ 1: 15 AM
Landing စာမျက်နှာတင်းပလိတ်များရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ စိတ်ကြိုက်သော်လည်းအချို့အလုပ်လိုအပ်နိုင်ပါတယ်!
3:2016 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 36 တွင်